Ogaden News Agency (ONA) – Shirar aad u miisaaman oo Ururwaynaha OYSU ku Qabtay Sweden,Denmark,Netherlands,USA, kenya,Australia,finland,Germany & UK.
Shirar aad u miisaaman oo Ururwaynaha OYSU ku Qabtay Sweden,Denmark,Netherlands,USA, kenya,Australia,finland,Germany & UK.
Posted by wariye5	/ November 20, 2011
Waxaa caasimada wadanka Sweden ee Stockholm ka dhacay shir ay soo qaban qaabiyeen Ururka Dhalinta Ogaadeenya ee afka qalaad marka la soo gaabiyo looyaqaano (OYSU) Shirka oo ay kasoo qayb galeen Ururka Hooyoyinka, Jaaliyada S.Ogaadeenya & dhamaan bulsha weynta soomaaliyeed ayaa waxuu ahaa mid dhamaan Bulshadii kasoo qayb gashay ay si diiran uga maqsuudeen.
Ujeedada shirkan oo ahaa mid lagu fashilinayay qorshe uu waayahanba cadawga gumaysiga Itoobiya uu maleegayay ayaa daaha lagaga rogay shirqoolada & beenta uu isku maaweeliyo balse wax kuma oolka ah. Gumaysatada Itoobiya ayaa isku dayda inay soo kala dhex gasho Halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeenya & shacabkeeda balse ku fashilanta talaabooyinka qalooca ee qaado.
waxaa lala wada socdaa in waayahanba Gumaysatada Itoobiya ay buunbuuninaysay shaqsiyaad u gacan galay gumaysiga, kuwaasi oo ka tirsanaa barnaamijka OYSU ee soo bandhiga tacadiyada shacabka ogaadeenya ee loo yaqaano Silent Cry, ayagoo walibana ku tilmaamay barnaamijkii Silent Cry inuu ahaa barnaamij shaqsiyaad uu watay uuna burburay, Hase yeeshee Ururka Midowga Dhalinta & Ardayda S.Ogadenia ayaa shaaca ka qaaday Silent Cry inuusan ahayn sida ay u sharxeen Gumaaysiga & Gumaysi kalkaalka balse uu yahay Barnaamij ku jira gacanta OYSU lehna ujeedo gundheer hadana ay soo wadaan qaybtiisii labaad lagana daawan doono dhamaan dunida sidii hore si kasii dareen & taabo dheer.
Shirkan ayaa ahaa mid aanan ku ekayn Stockholm oo kaliya balse ka dhacay sida Flen, Hallstahammar, Göteborg & dhamaan Aduunka oo dhan laamaha OYSU.
Shirka oo lagusoo bandhigay warbixino wax ku ool ah ayaa ahaa mid soo jiidanayay dareenka dadweynihii meesha isugu yimid, Sidoo kale waxaa la isku weydarsanayay su’aalo dhaxalgal ah, kuwaasoo ay ka hamiiq tireen jawaabahoodii masuuliyiintii daadihinayay shirka oo ahaa kaadir OYSU.
Gabagabadii shirka ayay dhamaan Bulshadii kasoo qayb gashay shirka isu dardaarmeen siday u dardar galin lahaayeen hawlaha horyaala ugana hortagi lahaayeen wax yeelo walba oo soo wajahda ayagoo muujinayay inay leeyihiin awoodeeda & kartideeda. Masuul u la hadlay saxaafada ayaa waxaa erayadiisa ka mid ahaa sida CWXO ay gudaha ugaga adkaadeen Cadawga ayaan ayaan dibada ugaga adkaanaynaa waana mid aan suurogal ahayn in sinaba cadawga ugu fushado hawlihiisa dibada. OYSU ayaa wacad ku martay in marnaba suurtoobaynin qorshayaasha gumaysatada Itoobiya ay qurbaha ka damacsantahay ayagoo ku tilmaamay hadalada kasoo yeedha cadawga & cadaw kalkaalkuba in ay yihiin riyo aan sagaari ka doogsanayn. Dhanka kale wadamada Denmark,Netherlands,USA, kenya,Australia,finland,Germany & UK ayaa lagu qabtay shirar kan dhigooda ah oo isku wada ujeedo ah si wayna ay uga soo qaybgaleen dhamaan xubnaha iyo taageerayaasha OYSU.